प्रियंकाको अर्को उटपट्याङ, यस्तो फोटो सेयर गर्दै भनिन्- कसले राम्रोसँग देखायो ? (तस्बिर) – Taja Khawar
प्रियंकाको अर्को उटपट्याङ, यस्तो फोटो सेयर गर्दै भनिन्- कसले राम्रोसँग देखायो ? (तस्बिर)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०२, २०७८ समय: ०:२८:१७
ल भोट गरम्।” उक्त पोस्टमा कमेन्ट गर्दै आ’सिरमानले लेखेका छन्,”तपाईंले, कुनै प्र’तिस्पर्धा नै छैन। हरेक दिन बच्चाले नै जि’त्छ।” ग’र्भवती अवस्थाका प्रियंकाका केहि तस्बीर
Last Updated on: July 17th, 2021 at 12:28 am